नोभेम्बरमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
शरद duringतु को दौरान सप्पोरो पुरानो सिटी हल। भवन वरपरका रूखहरू झर्ने र color्गमा परिवर्तन हुन्छन् र यस प्रसिद्ध पर्यटक हटस्पटलाई सुन्दर देखिन्छ = शटरस्टक
यस पृष्ठमा, म नोभेम्बरमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा परिचय दिनेछु। अक्टोबरमा सुन्दर शरद leavesतुका पातहरू देख्न सकिन्छ, तर पातहरू नोभेम्बरमा पातलो रूखहरूबाट खस्छन्। पूर्ण विकसित जाडो आउनेछ। तपाईंले होक्काइडोको लागि प्रस्थान गर्नु भन्दा पहिले कृपया पर्याप्त जाडोको कपडा तयार गर्नुहोस्।
तल नोभेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
नोभेम्बरमा होक्काइडो बारे प्रश्न र उत्तर
नोभेम्बरमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
नोभेम्बरको सुरूमा होक्काइडो मौसम
नोभेम्बरको बीचमा होक्काइडो मौसम
नोभेम्बरको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा नोभेम्बरमा हिउँ पर्दछ?
होक्काइडोमा कहिलेकाहीँ नोभेम्बरदेखि हिउँ पर्न थाल्छ। यद्यपि हिउँ अहिलेसम्म जम्मा भएको छैन र पग्लनेछ। नोभेम्बरको अन्ततिर क्षेत्र मा निर्भर गर्दै हिउँ बिस्तारै जम्मा हुनेछ।
नोभेम्बरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ?
होक्काइडोमा, जाडो नोभेम्बरमा शुरू हुन्छ। यो अझै दिउँसोमा १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ, तर बिहान र साँझ जमिनमुनि रहनेछ। नोभेम्बरमा होक्काइडो डिसेम्बरमा टोकियो भन्दा चिसो छ।
नोभेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
तपाईंलाई नोभेम्बरमा अदालत चाहिन्छ। प्यान्ट अन्तर्गत टाईट लगाउन अझ राम्रो हुन सक्छ विशेष गरी नोभेम्बरको अन्तमा। यो कहिलेकाहीं नोभेम्बरको अन्तमा हिउँसँग चिप्लन्छ। म एडीको सट्टा बुट लगाउने सल्लाह दिन्छु। जापान मा जाडो को कपडा को बारे मा निम्नलिखित लेखहरु मा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हिउँले ढाकेको परिदृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने, जनवरी-फेब्रुअरी उत्तम हो।
यस पृष्ठमा, म जनवरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। यदि तपाईं जनवरीमा होक्काइडोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कृपया कोट जस्ता पर्याप्त जाडो संरक्षण नबिर्सनुहोस्। होक्काइडोको पश्चिम तर्फ जापानको सागरबाट आउने बादलहरू हिउँ पर्नेछ र यति हिउँ पर्नेछ।
फेब्रुअरीमा, सप्पोरो हिउँ उत्सव सहित, होक्काइडोमा धेरै जाडो चाडहरू आयोजना गरिन्छ। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै मानिसहरू यस समय होक्काइडो जाँदैछन्। यद्यपि फेब्रुअरीमा, होक्काइडो एकदम चिसो छ। यदि तपाईं फेब्रुअरीमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया पर्याप्त सुरक्षा नबिर्सनुहोस् ...
नोभेम्बरमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईले यो ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, होक्काइडो (सप्पोरो) मा न्यूनतम तापक्रम नोभेम्बरको अन्तीममा जमिनमा तल झर्छ। जापानका अन्य क्षेत्रहरू नोभेम्बरमा शरद inतुमा अझै छन्, तर तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि होक्काइडो जाडोमा छ।
२ Nov नोभेम्बर २०१:: सप्पोरोमा होक्काइडो तीर्थ। नोभेम्बरको अन्तमा, यो कहिलेकाँही यस्तो सुख्खा हुन्थ्यो। यद्यपि त्यहाँ धेरै हिउँ जम्मा भएको छैन = शटरस्टक
होक्काइडोमा, दिनको अधिकतम तापक्रम अझै धेरै दिन १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ, बिहान र साँझको तापक्रम स्थिर रूपले ढिलो हुन्छ। नोभेम्बरको मध्यमा दिनको न्यूनतम तापक्रम -10 डिग्री सेल्सियसको आसपास रहनेछ।
यस समयमा, टोकियो, ओसाका, क्योटो र यस्तै अन्य शरद ofतुको बीचमा सुन्दर शरद alतु पातहरू देख्न सकिन्छ। यद्यपि, सावधान रहनुहोस् कि होक्काइडोको मौसम एकदम फरक छ।
नोभेम्बरको पहिलो आधामा होक्काइडोका धेरै ठाउँमा पहिलो हिउँ मनाइन्छ। त्यस पछि हिउँ पर्‍यो र हिउँ पग्लियो। र खास गरी चिसो असाहिकावाको वरिपरि हिउँ नोभेम्बरको रूपमा चाँडो जम्मा हुन थाल्छ।
यदि तपाईं हिउँ सडक चलाउन अभ्यस्त हुनुहुन्न भने, तपाईंले सकेसम्म कार भाडा प्रयोग गर्नबाट अलग रहनु पर्छ।
यदि नोभेम्बरमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया बाक्लो कोट आदि ल्याउनुहोस्। यो नोभेम्बरको अन्तमा साँच्चिकै चिसो हुनेछ, त्यसैले ऊनी स्कार्फ र ग्लोभहरू ल्याउनु राम्रो हुन्छ।
किनभने हिउँको सडक फिसलन भएको छ, कृपया हिम जुत्ता लगाउनुहोस् जुन एक्लोमा चिप्लिदैन वा तपाईंको जुत्ता एक्लोमा गैर-पर्ची उपकरण नलगाउँदछ। टोकियो र ओसाकामा हिम जुत्ताहरू पनि बेचिन्छन्।
एन्टी-पर्ची उपकरणहरू नयाँ Chitose अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र सप्पोरोमा जुत्ता स्टोरहरूमा बेचिन्छ।
नोभेम्बरको अन्तमा, होक्काइडोमा ठूलो स्की रिसोर्टले अपरेटिंग सुरू गर्दछ। तपाईं हिउँदका खेलहरू जस्तै स्कीइ,, स्नोबोर्डि and र स्लेडि enjoyको मजा लिन सक्नुहुन्छ। साना बच्चाहरु पनि स्की रिसोर्ट मा हिउँ खेल्न सक्छन्।
भाडा सेवाहरू जस्तै स्की बोर्डहरू र स्की लगाउने काम भइरहेको छ, त्यसैले तपाईंले त्यस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्नु पर्छ।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (नोभेम्बरको सुरूवाती)
साप्पोरो २.11.6..3.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 33.2mm (3 सेमी)
ओटारु २.11.2..3.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 49.1mm (4 सेमी)
Asahikawa २.9.1..0.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 38.4mm (14 सेमी)
Biei 8.7 ℃ (-0.7 ℃) 33.2mm (9 सेमी)
फुरानो २.9.6..0.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 33.9mm (8 सेमी)
Wakkanai २.9.0..3.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 39.1mm (5 सेमी)
अबाशिरी २.10.3..2.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 23.1mm (2 सेमी)
उटोरो २.10.0..2.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 39.4mm (1 सेमी)
नेमुरो २.10.9..4.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 28.0mm (0 सेमी)
Kushiro २.11.2..1.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 21.4mm (0 सेमी)
ओबिहिरो २.11.0..0.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.6mm (0 सेमी)
Hakodate २.12.6..3.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 35.4mm (3 सेमी)
November नोभेम्बर २०१:: पर्यटकहरू सापोरो, जापान = शटरस्टकमा निज्यो बजार अन्वेषण गर्न
नोभेम्बरको सुरूमा होक्काइडोका प्रमुख शहरहरू, जस्तै सप्पोरो र हाकोडाटेमा थोरै हिउँ परेको छ। तपाईं अझै शरद पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
जे होस्, यो बिहान र साँझ एकदम चिसो छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँद भइसकेको छ।
होक्काइडोमा सूर्यास्त समय टोकियो र ओसाका भन्दा धेरै पहिले छ।
सप्तोरोमा नोभेम्बरको सुरूमा सूर्योदय समय करीव 6:१:13 हो। सूर्यास्त समय १ 16:२:23 तिर छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि रहेको नेमुरोमा, सूर्योदय समय करीव :5::57 छ। नेमुरोको सूर्यास्त समय करिब १ 16: ० 05 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (नोभेम्बरको मध्य)
साप्पोरो २.7.9..1.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 37.3mm (4 सेमी)
ओटारु २.7.5..1.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 51.5mm (17 सेमी)
Asahikawa 5.3 ℃ (-2.1 ℃) 40.1mm (39 सेमी)
Biei 4.7 ℃ (-3.2 ℃) 32.5mm (31 सेमी)
फुरानो 5.6 ℃ (-2.7 ℃) 38.9mm (30 सेमी)
Wakkanai २.5.6..0.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 41.1mm (20 सेमी)
अबाशिरी 7.0 ℃ (-0.1 ℃) 18.1mm (6 सेमी)
उटोरो 6.5 ℃ (-0.2 ℃) 30.2mm (8 सेमी)
नेमुरो २.8.0..1.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 31.0mm (1 सेमी)
Kushiro 8.4 ℃ (-1.2 ℃) 20.8mm (1 सेमी)
ओबिहिरो 7.7 ℃ (-1.5 ℃) 17.1mm (2 सेमी)
Hakodate २.9.3..1.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 40.0mm (7 सेमी)
नोभेम्बर ११, २०१:: बिहान खाडी क्षेत्र वरिपरि अवस्थित माछा मार्ने डु port्गा पोर्ट। हकोडाटे शहर होक्किडो, जापान = शटरस्टकको दक्षिणी तटवर्ती शहर हो
नोभेम्बरको मध्यमा, तपाईं धेरै हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ। सप्पोरो र ओटारु जस्ता शहरहरूमा पनि यस समयमा हिउँ पर्न सक्छ।
नोभेम्बरको मध्यमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6:२:26 हो। सूर्यास्त समय करिब १ 16:१२ हो।
पूर्वी होक्काइडोमा नेमुरोको सूर्योदय समय करीव 6:१० छ। सूर्यास्त समय लगभग १:10::15:54 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (लेट नोभेम्बर)
साप्पोरो 5.9 ℃ (-0.6 ℃) 33.6mm (19 सेमी)
ओटारु 5.6 ℃ (-0.6 ℃) 46.2mm (24 सेमी)
Asahikawa 3.2 ℃ (-4.0 ℃) 38.7mm (54 सेमी)
Biei 2.6 ℃ (-5.5 ℃) 29.7mm (43 सेमी)
फुरानो 3.3 ℃ (-4.7 ℃) 32.2mm (41 सेमी)
Wakkanai 3.8 ℃ (-1.1 ℃) 40.8mm (28 सेमी)
अबाशिरी 4.8 ℃ (-2.0 ℃) 18.9mm (10 सेमी)
उटोरो 4.7 ℃ (-2.0 ℃) 39.1mm (17 सेमी)
नेमुरो 6.1 ℃ (-0.3 ℃) 25.5mm (3 सेमी)
Kushiro 6.5 ℃ (-3.0 ℃) 21.8mm (4 सेमी)
ओबिहिरो 5.4 ℃ (-3.5 ℃) 21.9mm (6 सेमी)
Hakodate 7.1 ℃ (-0.4 ℃) 32.7mm (17 सेमी)
नोभेम्बर २२, २०१:: सप्पोरो शहरमा होक्काइडो तीर्थ। हिउँ पट्टि देखिन्छ = शटरस्टक
होक्काइडो नोभेम्बरको अन्तमा साँच्चिकै चिसो हुनेछ। साप्पोरो जस्ता प्रमुख शहरहरूमा पनि हिउँ पर्न थाल्छ।
स्की क्षेत्रहरू जस्तै निसेको यस समयमा अपरेटिंग शुरू गर्दछ।
होक्काइडोको पूर्वी भागमा, यो पश्चिमी किनारमा जस्तै हिउँ पर्दैन जुन सप्पोरो र ओटारु हो। जे होस्, यो धेरै चिसो छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्!
यस समय सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6::38 छ। सूर्यास्त समय लगभग १:16:०:04 छ।
नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :6:२२ हो। सूर्यास्त समय लगभग १ .::22 छ।